Semalt Inotsanangura Zvakagadzirwa Zvinowedzera Zvizhinji Zvokuda Kwemabhizimisi Vatengi
electronica reparaciones.jpg" border="0" width="100%" style="margin-bottom:35px; margin-top:10px" align="absmiddle">
Chivakwa chekubatana chinopa kusava nechokwadi. Inowedzera nzvimbo yepaitikuonekwa asiwo kunokonzera njodzi yokuva nechepasi paGoogle kutsvaga. Mabhizimusi anobatsirwa nehupamhi hwehutano hunobudamashizha makuru ezveshizha, masangano makuru emabhizimisi, uye nheyo dzeduzhinji.
Kuderera kwehutano hunovhiringidza nzvimbo yewebsite rankings. Kubatana kwakadaro kunowanzobva kunzvimbovakaita sevaparidzi vashoma, uye avo vanotengesa mazano. Zvakaoma kuongorora hutano hwekubatana nekuda kwekuchinja kwakasiyana pamusika.Zvisinei, ivo vachiri kubatsira Google uye kutsvaga injini kuisa nzvimbo.
Andrew Dyhan, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt Digital Services inotsanangura kuti chii chinoita kuti zvinyorwa zvive nezvimwe zvibatanidza.
Kusiyana pakati peZvibvumirano uye Zvimwewo
Libatanidza kubatanidza webhusaiti imwe kune imwe asi igoverana hukama hwevanhuzvinyorwa zvenhau kune mamwe mawebsite. Zvose izvi zvinobatsira kuwedzera webhusaiti yekutengesa uye kukurudzira kuziva. Saka, hukama hunobatsiranokuda kweSEO sezvavanowedzera bhizinesi rebhizimisi pamutsara wokutsvaga pasinei nezvikamu.
Tanga Kuwana Mazano
Bhizimisi vanorayirwa kuti vatange kuwana mari kubva kune-top-notch qualitythey create..Zviri nani kuwana zvikwereti, kunyengeterera, kana kuita chimwe chinhu pane kubhadhara. Nokudaro unogona kudzivisa zvikweretikuwana hukama. Google inotarisa chero hutsika hwakaderera kana hutenga dzavanowana munguva yekuongorora. High-quality links dzinogadzira anchormagwaro uye haazomborangarirwi. Nzvimbo dzakakwirira uye dzinovimbwa nenzvimbo dzinosangana idzi idzi, zvichiita kuti zvive nyore kutenga.
Mhosva dzinogona kuderedza peji rewebhu kana webhusaiti yose, kuderedzachiyero chemotokari Nzvimbo idzi hadzisi mupeji yekutanga yekutsvaga injini. Maererano naAndizabeth Dyhan, zano iri rinotarisirwanudge webmasters mukutora links.
Chikoro chekare chechikoro
Bhenganisa bhana inzira inoshandiswa kukwezva nekukurudzira vashanyikuumba hyperlinks kunzvimbo. Kuwana mazano nehutano hwehutano hwakafanana nehutano hwekugadzirisa sezvo unoshanda pairi kusvikira wakwanazvakakwana kuparidzira. Imwe iyo inobvumira vanhu vane simba vanoziva nezvazvo uye vanotarisira kuti hukama hunotanga kupinda. Link link haisiinoshandiswa chete semashoko akatevedzerwa zvinyorwa sezvo ichibatanidzwa mumichina yekushandisa uye calculators zvakare. Semalt nyanzvi dzakawana kuti iwe unofungidzirwaZviri kuitika ndezvechokwadi kuti uwane 20 kusvika ku50 dzimwe nguva pakutsvaga kwegated content.
Kuverenga muchidimbu chidimbu chinowanikwa humwe hutano tinofanira kutaura zvinotevera:
Zvakagadziriswa zvakatsigirwa nekutsvakurudza, uye maonero-kuumba uwandu hwemashoko anowanikwa akawanda
75 muzana yezvinyorwa zvisingatauri zvinyorwa zvinowana zerokuratidza huwandu hwehurombo hwakagutsikana uye kusakwanisa kwekugadzirisa kukurudzira
85 muzana yezvinyorwa-based content zvine pasi pe1000mashoko. Chinyorwa chinofanira kuva nemashoko anopfuura 1000 kuti agamuchire dzimwe hukama
Tsvaga-zvigadzirwa uye nei-zvigaro zvinowana mamwe mazano kune zvigadziriswa zviripo
Kugutsikana kwekugadzira kunoshanda kumakambani makuru uye maduku. Kunyange zvakadaro,zvizhinji zvezvinyorwa zvakabudiswa hazvibatanidzi-zvakakodzera. Kunyanya kukoshesa kukurudzirwa kwehupenyu ndicho chinhu chikuru chekubudirira kubudirira. Mukuwedzera pane izvi,Kuvandudzwa kwehupenyu kunoda nguva dzose kukurudzirwa kuburikidza nekusvika kunze kwekukurudzira, kuisa mubhadharo kukurudzira, uchishandisa mashandisi akawandayezvakagadzirwa, kushandisa nguva yakawanda yehuwandu hwekusimudzira, nekuitisa zvinyorwa kakawanda kana bhizinesi rako rinedzokera muzvikwereti.